ကြမ်းမှကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းမ – CHAR TAKE
05/09/2021char take0 Comments
( စိတ်ကူးယဉ်အပြာဇတ်လမ်းဖြစ်ပါသည် )
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစ သုံးရက်သာရှိသေးတဲ့ အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီး သည်လေး အိအိငြိမ်း အိမ်တံခါး ခေါက် သံကြောင့် အပြေးကလေး ထွက်လာမိသည် ။ လင်သား ကိုသက်အောင် အလုပ်ပြန် လာရင် ကြိုဖို့ အလှဆုံးပြင်ပြီး အပြေးကလေးထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည် ။ တံခါးလေးဖွင့်ပေးသောအခါ ကိုသက်အောင်အပြင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပါလာ လေသည် ။ အော် ဧည့်သည်တွေ ပါလား အိမ်ထဲ ကြွပါရှင့် ) အသီးသီး အခန်းထဲ ဝင်လိုက် ကျ လေသည် ။ ( မိန်းမ ရေ ဒီနေ့ရုံးက ကောင်တွေ ကို လည်း ပြုစု ရသေးတယ် ကို အိမ်ပြန် နောက်ကျလို့စိတ်မဆိုး နဲ့နော် )အသံ က နည်းနည်းမူးစပ်စပ် ဖြစ်နေသည် ။( ရပါတယ် အကိုရယ်အိတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကအဝေး မှာ ဆောင်တာဆိုတော့ သူတို့ကို ပြန် ဧည့်ခံ ရမှာပေါ့ )( မှန်တာပေါ့ မိန်းမ ရာ ဒီ က နှစ်ယောက် က ဒီ ကွန်ဒို က အိမ်နီးနားချင်း တွေပါ . . )
အိအိငြိမ်း အပြုံးလေးဖြင့် နူတ်ဆက်လိုက်သည် ။သက်အောင်လျှာ လေးအာလေး ဖြင့်(ဒီဘက်ကမင်းသွေးတဲ့ သူကရှေ့ အခန်းက ဒီဘက် ကအောင်သော်တဲ့ သူက အောက်ထပ်က သူတို့ကို ပြုစုဖို့ ခေါ်လာတာ ဒီမှာအရက်နဲ့ ဘီယာပါလာတယ် မိန်းမ အမြည်း တစ်ခုခု စီစဉ်ပေး ) ( ကောင်းပါပြီရှင့် ရပါစေမယ် )အိအိငြိမ်း နောက်ဘေးခန်း ကို တည်ငြိမ်စွာ ထွက်သွားလေသည် ။သူ မရဲ့ နိမ့်ချည်မြင့်ချည် တင်သားတွေနဲ့ နောက်ကျော အလှကို မင်းသွေးမျက်စိ တစ်ဆုံး အရသာခံ ကြည့်ရှုလိုက်လေသည် ။ (ကဲကိုယ့်လူတို့ကျွန်တော် လည်းသွားကူလိုက်အုန်းမယ် ခဏခဏ )သက်အောင်လည်းအိအိငြိမ်း နောက်လိုက်သွား လေသည်။ မကြာမှီအိအိငြိမ်း ရောက် လာကာ စားပွဲခုံ ပေါ် ဖန်ခွက်လေး တွေလာချပေးသည် ။စားပွဲကို ခါးလေး ကုန်းကာချ ဖန်ခွက်ချလိုက်သည်မို့ ဟိုက်သွား သော အကျီ ငြေ်္ကာင့်အိအိငြိမ်းရဲ့ ရင်သားဖွေးဖွေးတွေကို မင်းသွေးနဲ့ အောင်သော် ထပ် မြင်လိုက်ရတော့ လီး တွေ တောင်ကုန်ကျသည် ။
အိအိငြိမ်း အမြည်းစီစဉ်ရန် ထပ် ဝင်သွား ပြန်ပြီ ။ မင်းသွေးကကာ မလိုက်စားတဲ့ လူ တစ်ယောက် သူ့မှာ အိပ်ဆေး တွေကွန်ဒုံး တွေ အမြဲဆောင် ထား တတ်တယ် မင်းသွေး ဖန်ခွက် တွေ ထဲ အရက်တွေ ထည့်ပေး ထား လိုက်သည် ။ အိအိငြိမ်း ရဲ့ ခွက်ထဲ အချိုရည်ထည့်ကာ အိပ်ဆေးမှုန့်လေး ခတ်ပေးလိုက်သည် ။ သက်အောင် ခွက်ထဲ လည်းနည်းနည်း ထည့်ပေးလိုက်ပြီး ဟန်မပျက် ပြန် နေလေသည် ။ မင်းသွေးက တစ်ကိုယ် ထီး သမား လူရှုပ် လူပွေ ။ အောင်သော်ကတော့ မိန်းမနဲ့ကလေး တစ်ယောက်နဲ့မို့ အတင့်မရဲဘဲ အကဲသာခတ် နေသည် ။ မကြာမှီ အမြည်းပွဲ လေးတွေကိုင်ကာ သက်အောင်နှင့် အိအိငြိမ်း ထွက်လာလေသည် ။ ( အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီ ရှင့် စားကျ နော် အားမနာ နဲ့ ) ( ရပါတယ် ကျွန်တော် ကျွဲရိုင်း ထည့်ပေး ထားတယ် သောက်တယ် မလား ) ( အားနာစရာ ရှင် အကို တို့ဘဲ သောက်ကျပါ )သောက်ကျစားကျစကားပြောကျရင်း အိအိငြိမ်း မျက်လုံးများ လေးကာ ခုံပေါ်မှာတင် အိပ်ပျော်သွား လေသည် ။
သက်အောင်နဲ့ အောင်သော် စကားတွေ ဖေါင်ဖွဲ့ရင်း သက်အောင်လည်းများပြီး မှောက်သွားလေသည် ။ မင်းသွေးကဟန်ပြ သောက်ထားသူမို့ ( အောင်သော် မင်းသက်အောင်ကို ခဏ အဖော်လုပ်ပြီး ထိန်းထားကွာ ငါ အိ အိငြိမ်း နဲ့ ခဏ လောက် ကစားချင်လို့ )(ဟာ ဟေ့ကောင် ပြသနာ တက်မယ်နော် ) ( မင်းကလည်း အေးဆေးပါ နောက်နေ့ မင်းအတွက်ပါ ဖန်ပေးမယ် ) အိအိငြိမ်းကို မင်းသွေး အသာဆွဲထူကာ အိပ်ခန်းဝကို ပွေ့ခေါ်သွား လေသည် ။အိ အိငြိမ်းကတော့ တုတ်တုတ်မလှုပ် ။ မင်းသွေး နုထွေးအိစက် နေသော အိအိငြိမ်းကို အခန်းဒေါင့်လေးမှာ ထိုင်ရပ်သားလေး အနေအထား မှေးထားလိုက်သည် ။ အဆီတစ်ဝင်းဝင်းနဲ့ အိအိငြိမ်းကို မင်းသွေး လိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် လီးအပြတ်တောင် နေလေသည်။အိအိငြိမ်းအကျီ င်္လေးကို အသာမ ချွတ်လိုက် လေသည် အထဲ က ဘော်လီ လေး ပါ မကျန် ချွတ်လိုက် လေသည် ။ စို့ချင် စရာ နို့သီးခေါင်း လေး တွေကြောင့် မင်းသွေး တံထွေး တောင် မြို ချ မိသည် ။
ခဏစိတ်ထိန်းကာ ထမိန်လေးကို အသာလေး ဆက်ချွတ်ပြီး အတွင်းခံ လေး အောက် က စောက်ဖုတ် မို့မို့လေး ကို ကုန်းနမ်းကာ အနံ့လေး ခံလိုက်သည် ။ ( အား အမွှေးနံ နဲ့ အဖုတ်နံ လေး ရောပြီး သင်း နေတာဘဲ )မင်းသွေး အားမနာတမ်း အတွင်းခံလေးပါ ဆက်ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ အိပ် မောကျနေသော အိအိငြိမ်းခမျာ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဖြစ်နေသည် ။ အိအိငြိမ်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထောင်ဖြဲပြီးကား စေလိုက်သောအခါ အိအိငြိမ်း နံရံကို မှီကာအဖုတ်ဖြဲ ပြ နေသောအနေအထား ဖြစ်နေသည် ။မင်းသွေး ဘောင်းဘီ ထဲ ကဖုန်းကို ထုတ်လိုက်ပြီး အိအိငြိမ်းရဲ့ ချစ်စရာမျက်နာ ကစပြီးရင်သားတစ်ပြင်လုံးနဲ့ စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလှလှပါ ပေါ်အောင် ဓာတ်ပုံများစွာ ရိုက်လိုက် လေသည် ။ ကျေနပ်အောင်မှတ်တမ်း တင်ပြီး သောအခါ မင်းသွေး ဘောင်းဘီဆွဲလိုက်လေသည် ။
ဘောင်းဘီထဲကတုတ်ခိုင်သန်မာလှသော ဂေါ်လီတပ် လီးကြီးကမတ်ခနဲ ထွက်လာသည် ။အိအိငြိမ်းရဲ့ မျက်နာနုနုလေးကို လီးနဲ့လေးငါးချက် ထိုးကာ အ လန်းဆုံး အနေ အထားကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြန်သည် ။ နောက်ဖုန်းကိုဘေး ခဏ ချကာ နို့အုံ ဖွေးဖွေး တွေကိုဆုပ်ကိုင်ကာ အားရအောင် စို့ပစ်လိုက်သည် ။( ဟူး စောက်ပတ်က စီးပိုင်မည့်ပုံဘဲ )လီးထိပ်ကို တံထွေး စွတ်ကာ ဘေးစောင်း လှဲပြီး အိအိငြိမ်း စောက်ဖုတ် ဝ ကိုတေ့ကာ စောက်ခေါင်းထဲထိုး ထည့်လိုက် လေသည် ။လီးတစ်ဝက်လောက်ထိုးထည့်လိုက်လေသည် ။လက်တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုယူကာ အိအိငြိမ်း မျက်နာနှင့် အဖုတ်ထဲ လီးဝင် နေပုံကိုမှတ်တမ်းယူလိုက် ပြန်သည်။မင်းသွေးလီး ပြန်ထုတ်ကာ အိအိငြိမ်းကို ပက်လက်လှန် ပေါင်ကို ဖြဲ ပြီး စောက်ပတ်ထဲလီးထိုး ချလိုက် သည် ။( အားပါးပါး ကျပ်လိုက်တာစီးလိုက်တာကွာ သက် အောင် တခါဘဲ လိုးထား သေးတယ်ထင်တယ် ) အမှန်တကယ် လည်း မင်္ဂလာဦးည တစ်ခါ ဘဲ လုပ်ဖြစ်သေး သည် ။ မနေ့ကမူးမှောက်သွားလို့ မလုပ်ဖြစ် ဒီနေလည်း သက်အောင် မှောက် ပြန်ပြီ ဖြစ်သည်မို့ မင်းသွေးကံကောင်း နေလေသည် ။
မင်းသွေးခပ်ပြင်းပြင်းပစ်ဆောင့် နေလေသည် ။ ဆီးစပ် ခြင်းတစ်ဘမ်းဘမ်း နဲ့ ထိ နေလေသည် ။ ခုမှသိတဲ့ မိန်းကလေးကို ခိုးလိုး နေရတဲ့ အသိနဲ့ စီးပိုင် ကျပ် နေသော စောက်ဖုတ်ကြောင့် အချက် လေးဆယ်လောက်နဲ့တင်မင်းသွေး ပြီးချင်သွားသည်။မင်းသွေအားကုန် ပစ်ဆောင့် ထည့်လိုက်ပြီး အိအိငြိမ်း စောက်ခေါင်းထဲ လီး တစ်ဆက်ဆက် တုန်ကာ သုပ်ရည် များ ပန်းထည့် လိုက်လေသည် ။( ဟူး . ငါလိုးမ ကောင်းလိုက်တာ ကွာ )လီးပြန်ထုတ်ပြီး ဘောင်းဘီ ပြန်ဝတ်လိုက်ကာ နောက်ဆုံးသုပ်တရွှဲရွှဲအဖုတ်ထဲမှစီးကျ နေသာ အိအိငြိမ်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်သည် ။တစ်ရူးဖြင့် အိအိငြိမ်း ကို သန့်စင်ပေးပြီးအဝတ်အစား ပြန်ဝတ်ဆင်ပေးပြီး ပြန်ထမ်း ခေါ်လာကာခုံပေါ် ဟန်မပျက် တင်ပေးထား လိုက်လေသည် ။ ( ဟေ့ကောင်မင်း ပြီးပြီလား ဒါဆိုလ ည်း ပြန်မယ် ကွာ နောက်နေ့ငါ့လည်း ဖန် ပေးဦး ကွ ) ( အေးပါကွာ ဖန် ပေးမယ် ရှယ် ဖန်ပေးမယ်ဟဲဟဲ မင်း မိန်းမ ဝေဝေ ကို လည်း ပြန် ပေးရမယ် )( ဟာ မင်းက လွန်ပြီကွာ မင်း က လည်း အချင်းချင်း တောင် )
( မင်း အိအိငြိမ်းကို စိတ်ကြိုက်မလိုး ချင်ဘူးလား မင်း ကလေး လည်းသူ့အဘွားအိမ်မှာ သွားနေ နေတယ်မဟုတ်လားဘာလည်းမလဲ ဘူးလား သဘောဘဲ ကိုယ့် ဖါသာဖန်တော့ သူ့မိန်းမကျတော့ ပုတ်ဆက်နေတယ် ) ( အေးကွာ ငါကတူတယ်ထား ဝေဝေက တူပါ့မလား ) ( အဲ့တာ ငါ့ တာဝန်ထား မင်းမနက်ဖြန် အိအိငြိမ်း ကိုလိုးဖို့ အားမွေးထား ပြန်ကျမယ် လာ ) နောက်တစ်နေ့ ကိုသက်အောင် အလုပ်ကို အိအိငြိမ်း ထမင်းချိုင့် သွား ပို့ပြီး ပြန်အလာ အိမ်တံခါးကို သော့ဖွင့်နေတုန်း ရှေ့အခန်းမှ မင်းသွေး နှင့် အောင်သော် အခန်းထဲမှ ထွက်လာ လေသည် ။ မင်းသွေး ပြုံးပြကာ ( မအိအိငြိမ်း မင်္ဂလာ ပါ ) ချိုသာဆုံး အပြုံးလေး ဖြင့် အိအိငြိမ်း ပြုံးပြကာ( ဟုတ်ကဲ့ ရှင့် ကျွန်မ ညက လေ ခေါင်းတွေ မူးပြီး အိပ်ပျော် သွား လို့ ရှင် တို့ပြန်သွား တောင် မသိ လိုက်ဘူး )အောင်သော် က တော့ သူ့ရှေ့ က ဖြူဖြူ တောင့်တောင့် လှလှ မိန်းမချော လေး ကို ကာမစပ်ယှက်ရန် ရင်ခုန် နေလေသည် ။( အိအိငြိမ်း )( ရှင် ပြောလေ ) ( အိအိငြိမ်း ဒီ ကောင်မလေး ကို သိလား မသိဘူး )
မင်းသွေး အိပ်ကပ် ထဲ က ဖုန်း ကို ထုတ်ကာ ပုံ တစ်ခု ကို ပြလေသည် ။ အိအိငြိမ်း သိလို သိငြား စူးစမ်း ကာ ကြည့်လိုက်လေသည် ။ ပုံထဲ မှာ အရှက် တရား ကင်းမဲ့စွာ စောက် ဖုတ်အပြဲသား နှင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပုံဖြစ်နေသည် ။အိအိငြိမ်း မျက်ခုံးလေး ပင့်သက်သွားကာ ရင်ဝကို စို့ရိုက်သလိုစူးခနဲ ဖြစ်ကာမျက်နာလည်းနီရဲသွားသည် ။လက်ထဲကသော့တောင်လွှတ်ကျသွားသည် ။ ( သေချာကြည့်အုန်း ဒီမှာ ဒီမှာ )အိအိငြိမ်း လီးတစ်ချောင်းကို နမ်းနေတဲ့ပုံတွေ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်နေပုံတွေ နောက်ဆုံး လရည်ရွှဲသောပုံတွေကို ကြည့်ပြီး အိအိငြိမ်း လဲပြိုလုမတတ် ခေါင်းတွေ မူးသွားသည် ။ ရှက်လွန်း လို့ မျက်နာ တစ်ခုလုံး နီမြန်းကာ မင်းသွေး တို့ရှေ့ကနေ ကိုယ်ပျောက်သွားလိုက်ချင်မိသည် ။ (သိလား အမ သူ့ကို လိုင်းပေါ်တင် ပြီး ဖွ မလို့ ) ( ဟင် ရှင်တို့ ကျွန်မ ကို ညက ဘာလုပ် ခဲ့ကျ တာလည်း ဒီပုံတွေ က အို ရှင်တို့ ယုတ်မာ လိုက်တာ ဖျက်လိုက်ပါရှင် တောင်းပန်ပါတယ် နော် နော် )မင်းသွေး ဂွင် ရောက်နေပြီမို့( ဖျက်စေ ချင်ရင် ကျွန်တော့် တို့ စိတ်ကြိုက် အမ ခန္တာကိုယ် ကို ပေးမလား ဒါဆို ဘယ်သူမှမသိအောင် ထိန်းသိမ်းထား မယ် )
အိအိငြိမ်း ဖောက်ပြန်ရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်နေသည် ။ကိုသက်အောင် ကို သစ္စာ မဖေါက်ချင် ပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်က အိအိငြိမ်း ရဲ့ ပုံတွေ လူပုံ အလယ်မှာ အရှက်မကွဲဖို့လည်း အရေးကြီး နေသည် ။လမ်းနှစ်သွယ် ကို အိအိငြိမ်း အခက်တွေ့နေသည် ။( ကြာပါ တယ် အမရယ် လာ ) အိအိငြိမ်းကို မင်းသွေး အခန်းထဲ ဆွဲခေါ် လိုက်လေသည် ။ တံခါးကို ပိတ်ကာ ဂျတ်ထိုး လိုက်လေသည် ။ မင်းသွေးအိအိငြိမ်းကို ခုံပေါ်ထိုင်ခိုင်းထားသည်( အိအိငြိမ်း ဒီနေ့ကစပြီး မင်းလင်အလုပ်သွားတာနဲ့ငါ့အခန်းထဲလာရမယ်ငါခွင့်မပြုဘဲအတွင်းခံနဲ့ဘရာစီယာမဝတ်ကဘူး ငါ့ကိုသခင်လို့ခေါ်ရမယ်ဒီအခန်းထဲရောက်တာ နဲ့ မင်းအဝတ်အစား တွေ အကုန်ချွတ်ပြီး ဟော့ဒီ ခွေးလည်ပတ်ကို ဝတ်ရမယ် ပြီးရင် မင်းကိုငါလက်ထိပ်ခတ်မယ် မင်းရဲ့ခန္တာကိုယ် ကို ငါပိုင်မယ် ငါလိုးခိုင်းတဲ့ လူနဲ့မင်းခံရမယ် အားရင် အားသ လိုငါ့လီး ကို စုပ်နေရမယ် သဘော တူလား မတူ ရင်လည်း မင်း သဘော ဘဲ )
အိအိငြိမ်း မျက်ရည်စ တွေ ရစ်ဝဲ လာကာ တစ်ယောက် ထဲ ရှေ့မှာ အရှက်ကွဲ တာ နဲ့ လူ အများ ရှေ့မှာ မကွဲ ဖို့ သဘော တူ ဖို့ လမ်းကို ရွေးလိုက် ရတော့သည် ။ ( ဟုတ် တူပါတယ် ဟိုလေ လိုးခိုင်း တဲ့ လူ နဲ့ ခံရမယ် ဆိုတာ က လေ ) ( ငါသိပါတယ် မင်း မပေါက်ကြားစေ ရဘူး ငါ ပိုင်တဲ့ လူဘဲခိုင်းမှာ တစ်ယောက်နစ်ယောက်ပါဘဲ ကဲသဘောတူရင်အခုဘဲ စမယ် အိုကေလား လောလောဆယ် တော့ ဒီကောင့်ကို ပြီးအောင် စုပ်ပေးလိုက် ပြီးရင် အိမ်ပြန် ပြီအား မွေးထား )( ရှင့်ကတိသာတည်ပါစေ ကျွန်မယောင်္ကျားမသိပါစေနဲ့ ကဲလုပ်ချင်ရာသာလုပ်တော့ )ဖြစ်သမျှကိုခါး ဆီးခံဖို့ဘဲ တွေးထား လိုက်တော့သည် ။အိအိငြိမ်း အောင်သော် ရှေ့တွင်ထိုင်ကာ အောင်သော် ဘောင်းဘီ ထဲ က လီးကို ထုတ်ကာ စုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ အောင်သော် မင်းသွေးပခုံးကိုပုတ်ကာ( ပိုင်တယ်ကွာမင်းသွေး )(ပိုင်မနေနဲ့ မင်း မိန်းမဝေဝေကို လိုး နေချင်နေပြီ မင်း သေချာ စီစဉ် ထားတယ် မလား ) အောင်သော် လီးစုပ် ခံရင်း ( အေးပါကွ ငါ အိမ်သာ ဆိုပြီး ထွက်လာ တာ အဲ့တိုင်း ထား ခဲ့တယ် ) ( ဒါဆို ငါသွားပြီ )
အိအိငြိမ်း သက်အောင် လီးကို မညားခင်ထဲက ပန်းခြံတို့ ချောင်ထဲ ခြုံပုတ်ထဲ မှာ ခဏခဏ စုပ်ပေး ဖူးသူမို့ လီးစုပ်တာ မဆန်းပါ ။ အောင်သော် ရဲ့ လီး နံ့ က သက်အောင် ထက် ပြင်းကာ သေးစော်လည်းနံ နေသေးသည်မို့ အိအိငြိမ်း အောင်သော်အမြန်ပြီး အောင်ဂွင်းတိုက်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည် ။အိမ်ထောင်သည် မို့သိပ်မရှက်တော့ပါ ။ ပညာသားပါလှသော အိအိငြိမ်း ပလွေကြောင့် အောင်သော်လရည်တွေ အိအိငြိမ်း ပါးစပ်ထဲ ပန်းထွက်သွားသည် ။ အိအိငြိမ်း လရည်တွေ ကို ငုံကာ ပါးစပ် ကို ပိတ်ပြီး သူမ အခန်း ဆီ ပြန်ပြေး ကာ ရေစင် မှာ ထွေးချပြီး ပါးလုပ်ကျင်း မျက်နာသစ် သွားတိုက် ပစ်လိုက်သည် ။( ထှီ . တော်တော် အကျင့်ပုတ်တဲ့ကောင် အရည်တွေ နည်းတာ မဟုတ်ဘူး ) အောက်ထပ် အခန်း ထဲ သို့ မင်းသွေး ဝင်လိုက်သည် ။
အောင်သော့် အိပ်ခန်းထဲသို့ ခပ်တည်တည်ဝင်လိုက်သည် ။(ကိုကို ကြာတယ်ကွာ ဒီမှာ ညောင်း နေပြီ မြန်မြန်လာ တော့ကွာကို အောင်သော် )ဝေဝေ တစ်ကိုယ်ထီး ရေရွှတ်နေလေသည် ။ ဝေဝေက ကလေးအမေသာဆိုတာအသက်က ၂၅ဘဲရှိသေး ချောချက်လည်းလက်လန်တယ် ဟော့ရှော့ဘဲ နေတယ် ဝေဝေ လက်နစ်ဖက်ကို ကုတင်ထိပ်မှာ နှောင်ဖွဲ့ထားပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးဖြင့် ရစ်သိုင်းကာ ဖြဲထားသဖြင့် စောက်ဖုတ်တစ်ပြင်လုံး ရှင်းလင်းကာ စောက်စေ့ စောက်ခေါင်း ပီပီပြင်ပြင် မြင်နေရသည်။ မျက်လုံး ကို အဝတ် စည်း ထား သည်မို့ သူမဘာမှ မမြင်ရ ။ ( ကိုအောင်သော် ဒီမှာ ဝေ ညောင်းနပြီ )ပေါင်လယ်က ဝေဝေ စောက်ပတ်ကိုမင်းသွေး လျှာဖြင့်လျှက်တင်လိုက်သည် ။(အ မေ့ အားစ်အကိုရယ်အသံမပေးဘူးလန့်လိုက်တာ )ပြန်မထူးဘဲစောက်ပတ် ကိုသာလျှက်နေလေသည် ။ ဝေဝေ့စိတ်ထဲမှာ တော့ မင်းသွေးကို အောင်သော် လို့သာထင်နေလေသည် ။( အားလျှက်လျှက် အားရှီး ကောင်းလိုက်တာ ကို ရာ လျှက် အားမလေး ခိုက်တယ် ကွာ အကို့ ကိုလည်း ရှယ် ပြန်ပြီး စုပ်ပေးမယ် )
မင်းသွေး ဝေဝေ စောက်ရည်များ ဆင်းလာ အောင် လျှက်ပေးပြီး ဝေဝေ ကိုဘေးကိုပတ်သွားကာ ပါးစပ်ထဲလီးထည့်ပေးလိုက်သည် ။ ကံကောင်း ချင်တော့နှစ်ယောက်လုံး အလုံးအထည်တူကာ ဂေါ်လီလည်းတူသည်မို့ အောင်သော်ဟုသာထင်ကာ တစ်ယုတယ စုပ် ပေးနေလေသည်။ထိုစဉ်အခန်းဝသို့ အောင်သော်ရောက်လာကာ မလုပ်သေးဘူးလားဆိုပြီး မေးငေါ့ ပြ လေသည် ။မင်းသွေး ဝေဝေကိုလိုးရန် ကုတင်ပေါ် ပြန်တက်လိုက်သည် ။( ကိုလိုးတော့ မလို့လားလိုးတော့ ဝေ အရမ်းညောင်းနေပြီ ပေါင်ကား ထားရတာ )အောင်သော် မင်းသွေး နားကပ်ကာ ( ဟုတ်ပါပြီ ဝေရယ် ဝေ ကောင်းဖို့ပြင်သား )ဝေဝေ က တော့ ဘာမှမသိရှာပေ ။မင်းသွေးသူ့ လီးတန်ကြီး ကို ဝေဝေ စောက်ဖုတ်ဝကို တေ့ကာ အားဖြင့် ဖိ သွား ချလိုက်သည် ။ (အား ကိုရယ် ဖြေးဖြေးပေါ့ မှန်မှန်လေးလုပ် မလော နဲ့ ဝေ ညောင်းရကျိုး နပ်အောင် နော် )မင်းသွေး က တော့ ဂရုမစိုက်ပါ အသာပြန်ထုတ်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပစ် သွင်း လိုက်ပြန်သည် ။ စောင့်ကား ကြောင့် ဝေဝေ ရှေ့သို့ မြောက်တက်တက် သွားကာ ရင်အုံကြီး လည်း အိခနဲ အိခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။
မင်းသွေး ဝေဝေကို မညှာမတာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆော် နေလေသည် ။ အိအိငြိမ်း လို မကျပ် မစီးတော့ မင်းသွေး အားဖြင့်သာ ဝေဝေကိုလိုး လေသည် ။ ခပ်မြန်မြန်နှင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လုပ်နေ ရင်း အောင်သော်ကို အ ချက်ပြ လိုက်သည် ။ အောင်သော် သူ့မိန်းမဝေဝေ မျက်နာက အဝတ်ကို ဖြေပေးလိုက်သည် ။ ဝေဝေ ပြုံးကာချစ်လင် အောင်သော်ကိုရီဝေစွာ ကြည့်လိုက်သည် ။(ကိုတအားမြန်တယ်နည်းနည်းလျော့ ‘‘ ရှင်ရှင် မင်းသွေးဘယ်လိုလုပ် ဝေဝေကို တက်လိုး )( ကိုခွင့်ပြုတာပါ )ဝေဝေ မင်းသွေးရဲ့အရက်စက်ဆုံး စောင့်ချက်တွေ ကြောင့် မချိမဆန့် အော်ငြီးရင်း မျက်နာလေးငိုမဲ့မဲ့နဲ့( အောင်သော် ရှင် ရက်စက်တယ်လုပ်ရပ်တယ် သူများက အနိပ်စက်ခံနေရတာ သူကမိန်းမလိုးတာ မဟုတ်ဘဲ လူသတ် နေသလိုဘဲ ဝေ နာတယ် ကိုရဲ့ )
မင်းသွေးပြုံးကာ ( မင်္ဂလာပါ ဝေဝေ ရုန်းမှာဆိုးလို့ ကြမ်းလိုက်တာပါ အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင် ကောင်းကောင်း လိုးပေး မှာပေါ့ ) ဝေဝေ နူတ် ခမ်းလေး ဆူပုတ်ကာ မျက်စောင်းလေး မင်းသွေး အား ပစ်ပြီး ( အင်း မင်္ဂ လာပါ ဝေ ကို သူ့မယား ကျနေတာဘဲ လိုးနေလိုက်တာ သူတို့အရုပ်ကျ နေတာဘဲ ဝေကကို အောင်သော်ခွင့်ပြုတာဆို တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး အတွေ့အကြုံတာပေါ့)မင်းသွေး အရှိန်လျော့ကာ ပုံမန် လေးလိုးကာ စောက်စေ့ လေး ကို ချေပေး လိုက်လေသည် ။( အား ကောင်းလိုက်တာအကိုရယ် လိုးလိုး ဝေ ပြီးတော့မယ် နာနာလေး ချေပေး နှစ်ဦးအား ပြိုင်တူတက်ညီလက်ညီချီကာ နှစ်ယောက်လုံး အော်ဟစ်ကာ ပြိုင်တူပြီးသွားလေသည် ။ ( ကောင်းတယ်ကွာ ဝေ ခိုက်တယ် ကိုအောင်သော် ဝေ့ကို ခုလို ခွင့်ပြုပေးလို့ ကျေးဇူး တင်တယ် ) မင်းသွေး ဝေဝေ အဖုတ် ထဲ က လီးကို ထုတ်ကာ ဝေဝေ့ ပါးစပ်ကို တေ့ပေးလိုက်သည် ။
ဝေဝေ့ ကြိုးတွေကို အောင်သော် ဖြေပေးလိုက်သည် ။ ဝေဝေ မင်း သွေး လီး ကအရည်တွေကို ပြောင်အောင် လျှက်ပေး လိုက်ပြီး ထပ်မံ စုပ်ပေးလိုက်လေသည် ။မင်းသွေးချက်ချင်း ပြန်တောင်ချင်လာ လေသည်။အောင်သော်လည်း ပြန်တောင်နေပြီမို့ ဝေဝေကုန်ထား သော ဖင်နောက်ကိုဝင်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးထည့်ပြီး စောင့်လိုး လေသည် ။ ဝေဝေလည်း အောင်သော်ရဲ့ အလိုးကိုခံရင်းမင်းသွေးလီးကို တောင်လာ အောင် စုပ်ပေးနေလေ သည် ။ ထိုနေ့ တွင် ဝေဝေ တစ်ယောက် သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ threesome လိုးပွဲ ကို ရေကုန်ရေခမ်း ဆင်နွှဲ ပစ်လိုက်သည် ။ အိအိငြိမ်း လင် ဖြစ်သူသက် အောင်ကို ထမင်း ပို့ပြီးတာနဲ့ မင်းသွေး အခန်းထဲဝင်လိုက်လေသည် ။ အထဲ တွင် မင်းသွေး နဲ့ အောင်သော် တို့ မနက်စာ စားနေကျသည် ။ ( အိအိငြိမ်း ရောက်ပြီလား အတော်ဘဲ အစား စားရင်း လီးစုပ် ခံချင်နေတာ )အိအိငြိမ်း နားရှက် စရာ ကြားလိုက် ရပေမယ့်ဘယ်တတ် မနိူင်မလည်း အိအိငြိမ်းကမင်းသွေးရဲ့ကျွန်မ လေး ဖြစ်နေပြီမို့ မင်းသွေးတို့ စားပွဲအောက်ကိုဝင် မင်းသွေး ဘောင်းဘီ ဇစ် ကို ဖြုတ် ပြီး အထဲက လီးကိုထုတ်ကာ သူမ နူတ်ခမ်း နှစ်လွှာဟ က စုပ်ပေး လိုက်ရ လေသည် ။
မင်းသွေး ကျေနပ်စွာ ပြုံး ပြီး မုန့်ဆက် စား နေလေသည် ။မင်းသွေး အစား စားတာကိုရပ်ကာ အိအိငြိမ်းကို ခေါ်လာကာ( အိအိငြိမ်း အဝတ်အစား လေး ချွတ်ပါအုန်း ယူနီဖောင်းလည်း လဲ ပေးမလို့ ) ( ရှင်ယူနီဖောင်း ဆိုတော့ ဘာ ဝတ်ရမှာလား ကိုမင်းသွေး ) ( ဟေ့ဟေ့ သခင် လို့ခေါ်လေ . စည်းကမ်းထဲမှာ ပါတယ် လေမနေ့က ပြောထားသလို ဂျပန်ကားထဲကslave girl ဒီဇိုင်း လေး မင်း ကို ဆင်ပေး မလို့ )အိအိငြိမ်း မင်းသွေး နဲ့ အောင်သော် ရဲ့ ရှေ့ မှာ အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်ပေးပြီး လက်ဖြင့် ကွယ်သင့်ရာကို ကွယ်ကာ ခေါင်းလေး ငုံ့ထား လေသည် ။ မိန်းကလေး ဘဲ ရှက်မှာပေါ့မင်းသွေး ပစ္စည်းသုံးခု အိအိငြိမ်း ရှေ့ပစ်ချ လိုက်သည် ။ အောင်သော် ထို ပစ္စည်း ထဲ မှ တစ်ခု ကို ယူ ကာ အိအိငြိမ်း နား မှာ ရပ်လိုက်သည် ။
( အိအိငြိမ်းရယ် ဒီဟာလေး ပတ်လိုက်မှာ အိအိငြိမ်းနဲ့ဆိုလှမှာ )( ခွေးလည်ပတ်ကြီး ကျွန်မ ကလူဘဲဟာမဝတ်ချင်ဘူး ဒီတိုင်းလိုလို့ မရဘူး လား ( မရဘူး ငါကရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲ မြင်ဖူးတာ အပြင်မှာ မမြင်ဘူးဘူးကွ လုပ်စမ်းပါ ကွာ )အိအိငြိမ်း သက်ပြင်းချကာ လည်ပတ်လေးကို ကောက်ကာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် သူမ လည်ပင်း ကို ပတ်လိုက်လေသည် ။ ( ရှင်တို့နဲ့ တွေမှလူစင်စစ် က ခွေးဖြစ်တော့တယ် )( အောင်သော် လက်ထိပ်ခတ် ပေးလိုက်အုန်း )အိအိငြိမ်း လက် နှစ်ဖက်ကို နောက်ပစ် ပေးကာ စိတ်ထဲမှ တော်တော် ရစ်တဲ့ လူတွေပါ လား လမ်းဘေးက ဖာသည် မတောင် ငါ့ထက်သာသွားပြီလို့သာ တွေးလိုက် တော့သည် ။ ) မင်းသွေး နဲ့ အောင်သော် ရုပ်ရှင်ထဲက slave girl များ ထက် အပြင်က အိအိငြိမ်း ရဲ့ ပုံစံက ပို လီးတောင် စေသည် ။ တစ်မျိုး လေး လှ နေသည် ။ နို့သီး တွေ နဲ့ စောက်ဖုတ် ကို အတားအဆီး မဲ့ ပြသ ထား ရပြီး ပုံစံ က လည်း တကယ့် slave girl ဖြစ်နေသည် မို့ အိအိငြိမ်း မျက်နာလေး နီမြန်း နေသည် ။
( ကဲ မင်း မနေ့ က အောင်သော် အရည် တွေ ငုံပြီး ထွက်ပြေးတယ် ဆို ဘာ လို့ လည်း မျို မချ ဘူး လား ) ( အို ရှင် ကြံကြံဖန်ဖန် ရွံစရာကြီး ကို ) မင်းသွေး ရဲ့ ဦးတည် ချက် က အိအိငြိမ်း ကို အရှက်ကမ်းကုန် စွာ သူ လိုးချင် တိုင်း ခံ မယ့် မိန်းမ တစ်ယောက် ဖြစ်စေ မို့ပါ ရက်ရက် စက်စက် နိပ်ကွတ် ထား ဖို့ ကြံစည် ထားသည် ။ အိ အိငြိမ်း ကို အကြောင်းပြု ပြီး အောက် ဆုံးခန်း က သူဌေးကြီး ဦးမြတ်ဆိုး ရဲ့ ဇနီးငယ် ငယ် လေး မေမြတ်သူကို လိုးရန်လည်း ကြံရွယ်ထားသည် ။ ယခု အောင်သော် မိန်းမ ဝေဝေက တော့ မင်းသွေးအဖို့ bull နဲ့ hot wife ဖြစ်သွားလေ သည်မင်း မလုပ်ချင်တာဆိုငါက ပိုကို လုပ်ခိုင်းမှာ လောလောဆယ် မင်း အောင်သော် ရဲ့ အလိုးကို ခံလိုက်အုန်း ) အောင်သော် ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖြတ်ကာ ( လာစုပ် ပေးပါအုန်း ဒီတခါ တော့ ဂွင်းတိုက်ပြီး ပြေးလို့ မရတော့ဘူး )
အိအိငြိမ်း လက် က နောက်ပြန် အခတ် ခံထား ရသည် ကြောင့် အောင်သော် ရှေ့မှာ ဒူးထောက် ချ လိုက်ကာ မှိုပွင့် သဏ္ဌန်ဒစ် ကို ငုံကာ စုပ်ပေး လိုက်လေသည် ။ အိအိငြိမ်း စိတ်ပါလက်ပါ တော့ လုပ်ပေး မိနေသည် ။မင်းသွေး လက်ခုပ် လေး တီး ကာ( မင်း က လီးစုပ်မှာ ဆရာမဘဲ နော် ဒါနဲ့ စောက်ပတ် ယက် တာ ရော ဆရာ ကျလား ) အိအိငြိမ်း နားမလည်သော စကားဖြစ်သည် ။( မိန်းကလေး က လီး ဘဲ စုပ်တတ် မှာပေါ့ ဘဝ တူ ခြင်း ယက် စရာလား ရွံစရာကြီး )ထိုစဉ် အခန်း တံခါး ပွင့်ကာ ဝေဝေ ရယ် ဦးမြတ်စိုး ရယ် ဝင်လာ လေသည် ။( ဟယ်ကိုကလီးတောင်အစုပ်ခံ နေပြီလား ကို လီး ကို သူများ က စုပ်ပေး နေရင် ဝေ လည်း သူများ လီး ကို စုပ် မှာ နော် ) အောင်သော် က ဘာမှ ပြန်မပြော ဘဲ အိအိငြိမ်း ခေါင်း ကို သာ ပွတ်နေလေသည် ။ အိအိငြိမ်း လည်း အစ က သေမတတ် ရှက် သွား ပေမယ့် ဝေဝေ ရဲ့ စကား တွေကြောင့် အရှက်တွေ ပြေပြီး ကာမစိတ်တွေ ပြန် တက် လာကာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အောင်သော် လီးကို သာ ပိုပိုကဲကဲ စုပ်ပေး လိုက်သည် ။
ဝေဝေ ဦးမြတ်စိုး ဘောင်းဘီ ကို ချွတ်ကာ လီး ထုတ်ပြီး ငုတ်တုတ် ထိုင်ပြီး စုပ်ပစ်လိုက်သည် ။ သိပ့်ကြည့်ကောင်း နေတဲ့ မြင်ကွင်း ကြောင့် မင်းသွေး ဘီယာ တစ်ဗူး သောက်ကာ ဇိမ်ဖြင့် ကြည့်ရှု ခံစား နေလိုက်သည် ။( ဦးမြတ်စိုး နေပါအုန်းဗျ ကျွန်တော်က သူတို့လင်မယားနဲ့ slave girl ရဲ့ cock old လေးကြည့်ချင် နေတာ)ဝေဝေ အဝတ်အစားများအားလုံး ချွတ်ကာစားပွဲပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်သည် ။ ဝေဝေ စောက်ရည်စိမ့် နေသော စောက်ဖုတ်လေးကိုကိုင်ကာ အိအိငြိမ်း လည်ပတ်ကိုချိတ်ထား သော သံကြိုး ကို ဆွဲ လိုက်လေသည် ။ အိအိငြိမ်း လည်ပင်းက ဆွဲထားသော အရှိန်ကြောင့် ကုန်းကွကွလေးဖြစ်ကာ ဝေဝေ ထံ ရောက်လာ နေသည် ။( အိအိငြိမ်းအမ စောက် ပတ်ကို ယ က်ပေး ယက်ပေး ) အိအိငြိမ်း မိန်းမချင်း ရွံမိသည် ။ မတတ်နိုင်သည့် အနေအထား မို့ အသက်အောင့်ကာ လျှာလေးဖြင့် ယက်လိုက်သည် ။ အနံ့အသက် လေး ရလာ မိသည် ထိုအနံ က အိအိငြိမ်းကို စိတ်ထ စေ ကာ ပီပီပြင်ပြင် ယက် ပေးလိုက်သည် ။ ဝေဝေ က တော့ အိအိငြိမ်း ခေါင်း ကို ပွတ်ကာ ညီးညူ နေလေသည် ။ အိအိငြိမ်း က တော့ ဒီနေ့ လီး တွေ စုပ်လိုက် စောက်ပတ် ယက် လိုက် နဲ့ အချိန်ကုန် နေလေသည် ။ အိအိငြိမ်း ကုန်းထားသည်မို့ ဖင်ကြား က ပြူးနေ သော စောက်ဖုတ် ကို အောင်သော် လီး ထိုး ထည့်လိုက်သည် ။
အိအိငြိမ်းရဲ့ အိုးတောင့်တောင့်ကြီးကို ပွတ်ခါးကို ကိုင်ကာ ပစ်ပစ်ဆောင့် လိုက်လေသည် ။ စောက် ရည် တွေစိမ့် နေသည်မို့ လီးအဝင် အထွက် မှန်ကာ တဘွတ်ဘွတ် မြည် နေလေသည် ။ အိအိငြိမ်း က စောက်ဖုတ် ထဲ အောင်သော် လီး ဝင်လေ ဝေဝေ စောက်ပတ် ကို ခပ်ပြင်းပြင်း လေး ယက် မိနေလေသည် ။ ( ကို အိအိငြိမ်း ကို ပက်လက်လှန် ပြီး လုပ်ပါလား )ဝေဝေ တောင်း ဆိုမှု ကြောင့် အိအိငြိမ်း ကို ပက်လက်လှန် ကာ စားပွဲထိပ် ကို ပေါင်ကား ထား ကာ အောင်သော် က မတ်တပ်ရပ်ကာ အိအိငြိမ်း စောက်ဖုတ် ကို စောင့်လိုး နေလေသည် ။စောက်ပတ် အတွင်းသား များ ၏ ကျပ်စည်းပိုင်သော ညစ်ယူ မှုကြောင့် အောင်သော် အရသာ ထူး နေလေသည် ။ ဝေဝေ အိအိငြိမ်း မျက်နာ ကို စောက်ဖုတ် တေ့ကာ ခွထိုင် လိုက်သည် ။ အိအိငြိမ်း ဝေဝေ စောက်ဖုတ် ကို အားရအောင် နမ်းရှုံ့ကာ လျှက်ပေး လေသည် ။ ဝေဝေ့ အရည် တွေ အိအိငြိမ်း မျက်နာ မှာ ပေပွ နေသည် ။
အလိုးခံရင်း စောက်ပတ်ယက်နေရတဲ့ အရ သာ ကို အိအိငြိမ်း နှစ်သက်မိ သွားသည် ။ ဝေဝေ အယက်ခံရင်း သူမ ယောင်္ကျားကို ကစ်ဆင် လှမ်းပေး နေလေသည် ။ ထိုသုံးယောက်၏ပွဲကို ကြည့်နေ သော ဦးမြတ်စိုး သဘောကျကာ မင်းသွေး အား ( ညီလေးမင်း နှစ်ယောက် တစ်ယောက် မဆွဲ ချင် ဘူး လား ) ( စော် မှ မရှိတော့ တာ ) ( မေမြတ်သူ ဆိုရင်ရော အိအိငြိမ်း ကို ကူညီ ဖို့ slave girlအဖြစ် ထောက်ပံ့ ပေးမယ် ) ( ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါ ) အိအိငြိမ်းကို မနားတမ်း လိုး နေသော အောင်သော် ဝေဝေ ကိုကြည့်ကာ ( ငါ့မိန်းမလည်း slave girlအဖြစ် ပေးတယ်ကွာ )ပြီး၏။ ။ Crd